"Ny fitsangatsanganana" dia misy dikany hafa | Sansan
Ny "Travel" dia misy dikany hafa
Ho an'ny rehetra, ny "fitsangatsanganana" dia misy dikany hafa. Ho an'ireo ankizy mihetsi-po tokoa dia afaka mihinana ny sakafo matsiro izay mamonjy ny reny ny reny, ary afaka milalao am-pifaliana miaraka amin'ny namana, izany no tena sambatra. Ho azy ireo, ny dikan'ny dia dia "play" ary "mihinana"! Ho an'ireo zatovo voalohany izay mandeha am-pitiavana dia afaka mitarety miaraka amin'ny fanamiana ny akanjo, mitafy akanjo tsy mahazatra ary hipetraka amin'ny bus fitsangatsanganana miaraka amin'ireo olona tianao. Ho azy ireo amin'io fotoana io, ny dikan'ny dia dia "mitafy" sy "fitiavana"; Ho an'ireo tanora izay vao avy niditra tao amin'ny fiarahamonina ary feno fanahy miady, matetika ny dia ny dia. Feno hafanam-po ny fony ary tsy andrasana hahalala izay zavatra mahafinaritra ho avy. Inona koa no mendrika itadiavany sy hianarana. Amin'izao vanim-potoana izao, ny dikan'ny dia dia efa tafasaraka amin'ny "lalao" sy ny "fitiavana sy ny fitiavana"
, Fa manana dikany lalindalina kokoa. Ho an'ireo zokiolona manana traikefa manankarena eo amin'ny fiainana dia efa ela ny "fitsangatsanganana" no nahatonga ny antony. Tsy toy ny ankizy mandeha amin'ny fahafinaretana fa tsy tian'ny tanora hitady an-jambany izay tsy ananany ny tanora. Tian'izy ireo fotsiny ny hahita an'io tsara tarehy io. Eto an-tany, te handany fotoana bebe kokoa amin'ny fianakaviako aho ary hametraka fahatsiarovana tsara amin'ity fiainana fohy ity.
Rehefa mitsangantsangana ianao dia hahita voninkazo sy zava-maniry miavaka, vorona sy biby tsy fahita izay tsy mbola henonao hatramin'izay, tranga ara-tsosialy izay tsy mbola hitanao mihitsy ... Ho hitanao fa mahaliana tokoa ny dia. Mahatsapa ianao fa tsy mora ny fiainana amin'ny dia, mahalala ny mitia ny fitomboan'ny zavamaniry ao anaty valan-jiro, ny akoran'ny vorona, ny fanodinana ny cicada… Fampisehoana mahafinaritra isan-karazany, misy zavatra tsy azo ianarana avy amin'ny boky , mila Discover ianao amin'ny tena zava-misy. Mba hisintona an'io fotoana mahafinaritra io, ampiasao ny fandraisam-peo hitadihana, hahitanao. Ny fitsangatsanganana dia karazana fialana aina ara-pihetseham-po. Raha mijery ny lanitra manga sy ny ala be, dia hahatsiaro tena milamina ianao, ary hihatsara ny toe-tsainao. Lehibe ity tontolo ity, dia hankafizinao irery. Avelao ny rivotra iainana, ary avelao ny rivotra vaovao manodidina anao. Afaka matory am-pilaminana sy mamy amin'ny nofy milamina ianao. Ao amin'ny nofy mahafinaritra: ny fofon'ny ahitra dia toa vointona mamy.
Ny dikan'ny fitsangatsanganana dia ny hahafahanao mahita ny tena dikan'ny fiainana, afaka mampitombo ny fahalalana anananao ianao, afaka mahita zavatra mahaliana maro, azonao atao ny manadino sy mamelombelona